Edito Haingo ambony tsikoko lava
Hifarana ity ny fampielezan-kevitra. Hiroso amin’ny fifidianana isika rahafakampitso. Samy nanao izay ho afany nanao
Fahasalamana 4403 ireo olona voan’ny SIDA eto Madagasikara
Raha 631 ireo olona fantatra fa nitondra ny tsimok’aretina Vih/SIDA teto amintsika tamin’ny taona 2010 dia efa tafakatra 4.403 izany tamin’ny taona 2018 farany teo Mitombo isa hatrany ireo olona voany saingy vitsy ireo mbola fantatra.
Misy amin’ireo marary mantsy no efa sahirana amin’ny fiandrasana izany. Nanambara omaly Atoa Solomahefa Gaetan, tale jeneraly misahana ny tolotra ara-pitsaboana eo anivon’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka fa efa tena miezaka izy ireo. Izany no antony nametrahana ireo guichet miisa fito ao amin’ny hôpitaly HJRA, hoy izy, asa hiandraiketan’ny Arovy ny marary ka ny telo amin’ireo no miasa amin’ny andro alina sy ny andro tsy fiasana. Misy ihany koa ny fivarotam-panafody natokana ho an’ny sampandraharaha isanisany ka anisan’ireny ny oncologie izay efa manana ny azy, ny an’ireo izay hodidiana any amin’ny toeram-pandidiana, ny an’ireo miditra ao amin’ny vonjitaitra. Nankalazaina omaly ny faha-20 taonan’ny fiaraha-miasa teo amin’ny Anyma sy ny hopitaly HJRA Ampefiloha amin’ny fivarotana fanafody ho an’ny marary. Tanjon’ny roa tonta ny hanao ny tsara kokoa hatrany. Tsiahivina fa marary 1.519 isa tamin’ny 1.909 no nisitraka ny tolotry ny fanafody tao amin’ity hopitaly ity nanomboka ny volana janoary lasa teo.